Dr.ဒေါ်ခင်နွယ်ဝင်း၏ Facebook ပေါ်မှ ရှင်းလင်းဟောပြောချက်များ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Health & Fitness » Dr.ဒေါ်ခင်နွယ်ဝင်း၏ Facebook ပေါ်မှ ရှင်းလင်းဟောပြောချက်များ
Dr.ဒေါ်ခင်နွယ်ဝင်း၏ Facebook ပေါ်မှ ရှင်းလင်းဟောပြောချက်များ
Posted by padonmar on Dec 22, 2014 in Health & Fitness |5comments
တေ ဇော ဓာတ် နှင့် hormone များ ဆက် စပ် နေ ပုုံ
ခေတ် မီဆေးပညာရှင်တွေက ပြောပါတယ်၊ ခန္ဓာကိုုယ် ကြီး ရဲ့ system အား လုုံး မျှတနေမယ် ဆိုု ရင် ရော ဂါ တွေ မ ဖြစ် ကြပါဘူးတဲ့။ တစ်ခုုခုု ချွတ်ယွင်းသွား ပြီ ဆိုု ရင် တနေရာရာ က ရော ဂါ တစ်ခုုခုုအ နေ နဲ့ ပေါ်လာတော့တာဘဲ။ အဲ ဒီတော့ ပေါ်လာတဲ့ ရော ဂါ မျိုး စုုံ ကိုု ဘေး ထွက် ဆိုုး ကျိုး တွေ အ လွန် များ တဲ့ ဆေး မျိုး စုုံ နဲ့ကုုမယ့် အ စား ခန္ဓာကိုုယ် ကြီးမှာ လိုု အပ် နေ တဲ့ ဓာတ် တွေကို ပြန် ဖြည့် ပေး လိုုက် မယ် ဆိုု ရင် ဖြစ် နေ တဲ့ ရော ဂါ တွေ တ ဖြည်း ဖြည်း ပျောက် သွား မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။
နောက် ဆုုံး မှာ တော့ ဓာတ် ကြီး ၄ ပါး ပါ ဘဲ။ မျှ တ နေ ရင် ရော ဂါ မ ဖြစ် ပါ ဘူး။ ဓာတ် ကြီး ၄ ပါး လုုံး ဟာ အကုုန် သူ့ အ လုုပ် နဲ့ သူ အ ရေး ကြီး ပေ မဲ့ တေ ဇော ဓာတ် က တော့ ခန္ဓာ ကိုုယ် ကြီး အ လုုပ် ကောင်း ကောင်း လုုပ် ဘိုု့ အ ခ ရာ ပါ ဘဲ။ အင်္ဂ လိပ် လိုု ပြော ရ ရင် ခန္ဓာ ကိုုယ် ကြီး အ တွက် Master Conductor ပေါ့။ ဒီ တေ ဇော ဓာတ် လောင် ကျွမ်း စေ ဘိုု့ မှာ hormone ဓာတ် တွေ က ဘယ် လောက် အ ရေး ကြီး လဲ ဆိုု တာ နောက် ဆက် တွဲ အ နေ နဲ့အ ခွင့် သာ တဲ့ အ ခါ၊ တင် ပြ သွား ပါ့ မယ်။
မြန် မာ လိုု ဖတ် ချင် သော မိတ် ဆွေ များ အ တွက် Vitamin D3အ ကြောင်း သိ ကောင်း စ ရာ ဗ ဟုု သုုတ
ယ ခုု အ ခါ မြန် မာ ပြည် ၌ ရော ဂါ မျိုး စုုံ ထူ ပြော ပြီး ကျန်းမာ ရေး မ ကောင်း ကြ ပါ။ အ ကြောင်း မျိုး စုုံ ကြောင့် ဖြစ် ပြီး အ ရေး ကြီး တဲ့ အ ကြောင်း တစ် ခုု အ ကြောင်း တင် ပြ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။
Vitamin D3 ကိုု လူ တော်တော်များများ ထင် နေ တာ က အ ရိုုး တွေ ခိုုင် ခံ့ ကျန်းမာအောင် လိုု့ ဘဲ ထင် နေ ကြ ပါ တယ်။ ဒီ vitaminဓာတ် ရဲ့ အ လွန်အ ရေး ကြီး တဲ့ အ ချက် ကိုု လူ တွေ သိပ် မ သိ ကြပါ ဘူး။ သူ က ခန္ဓာ ကိုုယ် ခုု ခံ အား ကောင်း ဘိုု့့အ တွက် အ လွန် အ ရေး ကြီး ပါ တယ်။အ ရေ ပြား ကိုု နေ ရောင် ခြည် ထိ တဲ့ အ ခါ cholesterol က နေ ပြီး vitamin D3 ကိုု ထုုတ် လုုပ် လိုုက် ပါ တယ်။ ထုုတ် ပြီး ပြီး ချင်း ခန္ဓာ ကိုုယ် ထဲ မှာ အ လုုပ် မ လုုပ် နိုုင် သေး ပါ ဘူး။ အ သဲ နဲ့ ကျောက် ကပ် မှာ အ လုုပ် လုုပ် နိုုင် တဲ့ vitamin D3 ကိုု ပြောင်း ရ ပါ တယ်။
မြန် မာ ပြည် မှာ နေ ရောင် ခြည် လုုံ လောက် စွာ ရ ပေ မဲ့ လိုု့ မြန် မာ ပြည် ရဲ့ ဝတ် စား ဆင် ယင် မှု ကြောင့် တ ကြောင်း၊ အ သဲ ရောဂါ နှင့် ကျောက်ကပ်ရောဂါ ထူ ပြောခြင်း တို့ကြောင့် တကြောင်း vitaminDဓာတ် ကိုု လုုံလုုံလောက်လောက် မ ရ ကြပါ။ မိန်းမ ယောင်္ကျား အားလုုံး ထဘီ လုုံချည် နဲ့ အောက် ပိုုင်း ကိုု အ ကုုန် ဖုုံး ထား ကြပါ တယ်။ အင်္ကျီကျ တော့ လဲ များ သော အား ဖြင့် လက် ရှည် ဘဲ ဝတ် ကြ တာ ဆိုု တော့ အ ပေါ် ပိုုင်း လည်း နေ မ ထိ ပါ။
အ သဲ နဲ့ ကျောက် ကပ် ရော ဂါ သည် တွေ က လဲ များ တော့ vitamin D3ရှိ ပေ မဲ့ အ လုုပ် လုုပ် နိုုင် တဲ့ ဓာတ် ကိုု ပြောင်းဖို့ အား နည်း နေ ကြ ပါ တယ်။ပိုု ဆိုုး စေ တဲ့ အ ချက် က တော့ လူ တော် တော် များ များ ကလည်း hypothyroid ဖြစ် နေ ကြ တော့ ခုု ခံ အား သိပ် ကိုု နည်း နေကြတာ နဲ့ အ မျှ ရောဂါမျိုးစုုံဝင်တာ ခံ ကြရပါတယ်။အ သဲ ရော ဂါ ၊TB၊ B ပိုုး၊ C ပိုုး ၊ ကင် ဆာ စ သည် ဖြင့် ပေါ့။
အကြောင်း ရင်း တစ် ခုု ကိုု သိ ရှိ နား လည် သွား ပြီ ဆိုု ရင် “ ပြင် လိုုက် ရင် သစ် သွား မှာ ပါ”
– အ ရှင် ဆန္ဒာ ဓိက
ဘယ်ဆီကို ဘယ်လို စားသင့်သလဲ
မြေ ပဲ ဆီ၊ ပြောင်း ဖူး ဆီ၊ Canola oil ,Sunflower oil, Soybean oil ,Vegetable oil များ ထုုတ် လုုပ် ရာ ၌ အ စေ့ များ ကိုု အ ပူ ရှိန် အ မြင့် မှာ အ ပူ ပေး ပြီး အ ဆီ ကိုု ညှစ် ထုုတ် ရ ပါ တယ်။ Polyunsaturated oils – room temperature မှာ မ ခဲ ဘဲ liquid ဖြစ် နေ ပါ တယ်။ထိုု နောက် ဓာ တုု ဗေ ဒ ဆေး မျိုး စုုံ ကိုု သုုံး ပြီး စား သုုံး သူ ဝယ် ချင် အောင် အ ပြီး သတ် ရ ပါ တယ်။ ဒီ ဆီ တွေ ဟာ ဆီ ချေး တက် လွယ် ပြီး (rancid )ခန္ဓာ ကိုုယ် တွင်း ယောင် ကိုုင်း စေ ပါ တယ်။
ဒီ ဆီ တွေ ကိုု ဓာ တုု ဗေ ဒ နည်း နဲ့ ပြောင်း ထား တော့ unstable ဖြစ် လွယ် ပြီးး လူ ကိုု ဥ ပါဒ် ပေး မဲ့ oxygen free radicals တွေ အ များ ကြီး ရှိ ပါ တယ်။ ပိုု ဆိုုး တာ က ဒီ ဆီ တွေ ကိုု ဓာ တုု ဗေ ဒ နည်း နဲ့ ပြန် ခဲ အောင် လုုပ် ပြီး margarine , crisco oil အ နေ နဲ့ ရောင်း တာ ဟာ ဥ ပါဒ် အ လွန် များ ပြီး နှလုုံး ရော ဂါ ၊ ကင် ဆာ၊ ဆီး ချို၊ သွေး တိုုး စ သည် ဖြင့် ရော ဂါ မျိုး စုုံ ဝင် နိုုင် ပါ တယ်။
– ဘာ မ ဆိုု အိမ် လုုပ် တွေ ဘဲ စား သုုံး ကြပါ။ လော ဘ ဦး ဆောင် နေ တဲ့ ကုုမ္ဗဏီ ကြီး တွေ က ရောင်းတာ တွေ ရှောင် ရင်၊ သက် ရှည် ကျန်းမာ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။ ကျွန် မ တိုု့ ရဲ့ ခေတ် ကြီး က လုုံး ဝ ပြောင်း လဲ သွား ပါ ပြီ။ ရော ဂါ ထူ ပြော ပြီး အ သက် တိုု ကြမယ့် ကာ လ ရောက် လာ ပြီ ထင် ပါ ရဲ့။ သ တိ နဲ့ နေ ပြီး ဉာဏ် ကိုု သုုံး မယ် ဆိုု ရင် ခံ သာ ပါ လိမ့် မယ်။Olive oil ,coconut oil စား ကြ ပေါ့။ မီး ပြင်း ပြင်း နဲ့ ချက် ရင် အုုန်း ဆီ သုုံး ပြီး၊ salad အသုပ်စား ရင် သံ လွင် ဆီ သုုံး ပါ။
ဇီ ဝိ တိန္ဒြေ နှင့် ခေတ် မီဆေး ပ ညာ အ ယူ အ ဆ
ဆေး ပ ညာ (Functional medicine – ခန္ဓာ ကိုုယ် မှာ ရှိ တဲ့ system အား လုုံး ဟာ မျှ တ နေ တာ = ကျန်း မာ ခြင်း ) က ထွက် ဆိုု တာ က၊ လူ တစ် ယောက် ရဲ့ ကျန်း မာ ရေး ဟာ အ စာ အိမ် အောက် မှာ ရှိ တဲ့အူ ရဲ့ ကျန်း မာ ခြင်း ပေါ် မူ တည် ပါ တယ် တဲ့။ အူ တွင်း မ ကျန်း မာ တဲ့ သူ ဟာ ရော ဂါ မျိုး စုုံ ဝင် ပြီး ကျန်း မာ ရေး မ ကောင်း ပါ ဘူး တဲ့။
ဋီ ကာ ကျော် ဖတ် ရင်း နဲ့ ဘာ သွား တွေ့ သ လဲ ဆိုု တော့ မိ မိ နှင့် တကွဖြစ်ဖက် ကမ္မဇရုုပ်တွေ ရှင် သန် နေ အောင် စောင့် ရှောက် သော ကမ္မဇရုုပ်များ ၏ အ သက် သည် ဇီ ဝိ တ ရုုပ် ဖြစ် ပါ တယ်။ စောင့် ရှောက် ခြင်း မှာ အ စိုုး ရ လိုု့ ဇီ ဝိ တိန္ဒြေ လိုု့ ခေါ် ပါ တယ်။
စိတ် ဝင် စား စ ရာ ကောင်း တာ က တော့ ဇီ ဝိ တိန္ဒြေ ဟာ( ဥ ပါ ဒိန္န ကာ ယ )တ ကိုုယ် လုုံး မှာ ရှိ တဲ့ အ ပြင် အ စာ အိမ် အောက် နေ ရာ ဖြစ် တဲ့ ဝမ်း မီး မှာ လဲ ရှိ တယ် ဆိုု တာ ပါ ဘဲ။ ဆေး ပ ညာ သ ဘော နဲ့ ကြည့် မယ် ဆိုု ရင် လူ့အ သက် စောင့် ဟာ အူ ထဲ မှာ လဲ ရှိ တယ် ပေါ့။
အဲ ဒီ တော့ အူ ကျန်း မာ ရေး ဟာ ဘယ် လောက် အ ရေး ကြီး တယ် ဆိုု တာ ထင် ရှား နေ ပါ ပြီ။
အူ ကျန်း မာ ချင် ရင် လမ်း ဘေး စာ တွေ ရှောင်၊ gluten ၊ နွား နိုု့ ရှောင်၊ ဟင်း ရွက် တွေ ကြိတ် သောက်၊ probiotics တွေ သောက် ပြီး ကောင်း တဲ့ ပိုုး တွေ အူ ထဲ မှာ မွေး လိုုက် မယ် ဆိုု ရင် ခုု ခံ အား တွေ လဲ ကောင်း ပြီး ဇီ ဝိ တိန္ဒြေ က စောင့် ရှောက် အား တွေ များ ပြီ ပေါ့။
ကင် ဆာ နှင့် သ ကြား ဓာတ်
ကင် ဆာ ဟာ သ ကြား ကိုု အင် မ တန် ကြိုုက် တယ် ဆိုု တာ သိ ခဲ့ တာ နှစ် ပေါင်း တစ် ရာ ရှိ ခဲ့ ပါ ပြီိ။ သိုု့ ပါ သော် လည်း လူ နာ အ လေး ချိန် တက် ရင် ပြီး ရော ဆိုု ပြီး ကင် ဆာ ဆ ရာ ဝန် တွေ က အ စ လူ နာ စား ချင် တာ အ ထူး သ ဖြင့် အ ချိုုု တွေ ကြွေး တာ စိတ် ပူ စ ရာ ပါ။
သ ကြား ဓာတ် များ ရင် insulin ဓာတ် တက် မယ်၊ insulin ဓာတ် တက် ရင် အ ဆီ က လာပ် စည်း တွေ ပွား ရုုံ မ က ကင် ဆာ က လာပ် စည်း တွေ လည်း ပွား ပါ တယ်။ Insulin AMPK ( Kinase pathway ) နဲ့ ပါ။ Insulin makes cells grow including cancer cells.
ကိုုယ် ဖမ်း ချင် တဲ့ အ ရာ ကိုု သူ တိုု့ကြိုုက် တာ နဲ့ မျှား ပြီး ဖမ်း ကြ တယ် မ ဟုုတ် လား။ ဥပ မာ ငါး ဖမ်း ချင် ရင် တီ ကောင် ကိုု သုုံး သ လိုု ဘဲ ပေါ့။ ဒီ အ တိုုင်း ပါ ဘဲ ကင် ဆာ ဘယ် နေ ရာ မှာ ရှိ လဲ ဆိုု တာ သိ ချင် ရင် လူ နာ ထဲ ကိုု သ ကြား ( radio isotope tagged sugar ) ထိုုး ပြီး ကင် ဆာ ရှာ တဲ့ Pet Scan ကိုု တွင် တွင် ကြီး သုုံး နေြက တဲံ့အ ထောက် အ ထား ကိုု သာ ထောက် ရှု ပြီး ကြည့် ကြ ပါ တော့။
အ များ ကောင်း ကျိုုုး မိုု့ အ တွေး အ ခေါ် အ ယူ အ ဆ တွေ ပြန် လည် ဆန်း သစ် စေ ချင် ပါ တယ်။ အ တွေး အ ခေါ် ဟောင်း တွေ နဲ့ အ တိတ် မှာ မ ကျန် ရစ် ပါ စေ နဲ့။
ဟော ပြော ပွဲ တုုန်း က အ လွန် အ ရေး ကြီး တဲ့ အ ချက် တစ် ခုု ပြော ပြ ဘိုု့ မေ့ ကျန် ရစ် လိုု့ ဒီ က နေ ဘဲ ပြော ပြ ပါ တော့ မယ်။
မိ သား စုု အ လိုုက် ဆီး ချို ရော ဂါ ဖြစ် နေ တဲ့ သူ ရဲ့ က လေး တွေ က genetic predisposition for diabetes လဲ ရှိ နိုုင် တာ မိုု့ မှတ် ရန် အ ချက် က လေး တစ် ခုု တင် ပြ ချင် ပါ တယ်။
Early diabetes ကိုု စ တင် ဖြစ် စေ တဲ့ အ ကြောင်း ( ဆီး ချို ခ လုုပ် ကိုု ပွင့် အောင် ဖွင့် တဲ့ ) ဟာ –
၁. နွား နိုု့
၂. သ ကြား
၃.အ ချို မှန့် တိုု့ ဖြစ် ပါ တယ်။
က လေး တွေ ( ၁ နှစ် မှ ၁၂ နှစ် ) အ ရွယ် မှာ Vitamin D3 1000IU -2000IU တိုုက် ရင် Type 1 diabetes မှ ကာ ကွယ် ပေး နိုုင် ပါ တယ် တဲ့။ဒီ အ ချက် အ လက် ဟာ Vitamin D အကြာင်းသုုတေသနလုုပ်ပြီး ( PhD )ရ ထား တဲ့ နာ မည် ကျော် ဆ ရာ ဝန် ကြီး ရဲ့ တင် ပြ ချက် ဖြစ် ပါ တယ်။
ခင် နွယ် ဝင်း ရဲ့ အာ ဘော် မ ဟုုတ် ပါ။
အုန်းဆီ စားလို့ရတာ ကြားဖူးပါတယ်… သို့သော် မစားဖူးသေးပါ… မွှေးမွှေးကြီး ဖြစ်နေတော့ စားကောင်းပါ့မလား… သံလွင်ဆီကျတော့လဲ အသုပ်ထဲမှာဆို စိမ်းရွှေရွှေ အနံ့ဖြစ်နေမလားဘဲ… ရစ်တာမဟုတ်ပါ… ဘာများလွဲနေလဲ ရှင်းပြပေးပါ.. ဘယ်လိုချက်ရလဲဆိုတာလဲ ပြောပေးပါနော်…
စားလို့ ရတဲ့ သံလွင်ဆီက အနံ့သိပ်မပြင်းပါဘူးး။
သများ သကြား ကို ဖြတ်ထားတာကြာပါပြီ။
မဖြတ်နိုင်တာ ရွာထဲက သဂျားပဲရှိပါတယ်၊.
-ဆီကျတော့လဲ လွယ်လွယ်ကူကူ ပဲဆီ အကြော်ခံဆီ..စင်လေးတွေပေါ်က လှတပတ ဈေးသက်သာတာလေးတွေ ဝယ်သုံး
-ထမင်း..ဟင်း ကွကို ချက်မစားချင်တော့..ချက်ပီးသား အဆင်သင့်ကိုဘဲ ကောင်းကောင်း မကောင်းကောင်း အလွယ်တကူ ဝယ်စား..
-မျိုးနဲ့ ရိုးနဲ့ အချိုကြိုက်တာမို့ နွားနို့သကြား ထညက်ခဲ မြင်သမျှ အကုန်ဆွဲ ..
.တဆင့်ပြန်မျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အာတီဒုံ
.ငယ်ဘဝက နေပူထဲချည်းအလုပ်လုပ်ခဲ့ရသမို့… Vitamin D3တော့အပြည့်အဝရခဲ့တယ်လို့ထင်တာပဲ :))
အာ့ချို မော်ဒယ်မမတွေက ဗီတာမင်ဒီရအောင် တိုသထက်တို ဖော်သထက်ဖော်ဂျဒါဖစ်မယ်